Iitattoos zeCamaron, zabalandeli bemvumi eyaziwayo yeflamenco | abazobe mvambo
Ekhaya singaphezulu kwisandi somdlalo wevidiyo, ilitye elidala kunye nomculo we-elektroniki onje ngeSika iKopi, kodwa ukuba kufuneka sibhale amanqaku malunga Camaron tattoos, ilivo flamenco, zenziwa kakuhle kwaye nangendlela esifunda ngayo izinto ezimbalwa, ezingembi nazo.
Ngoko namhlanje Siza kuthetha ngee tattoos zeCamarón, obambene naye ngumculi-umbhali wengoma. Siza kuthetha ngokufutshane malunga nobomi bakhe kwaye siya kuphola kunye nento oye wafika ngokuqinisekileyo ukuyijonga, iingcamango ezimbalwa zazo zonke iintlobo ze tattoos apho avela khona. Kwaye ukuba ushiywe ufuna ngaphezulu, jonga ezi Iiflamingo tattoos (nangona ezi zivela kwisilwanyana, kungekhona isimbo somculo!).
1 Yayingubani uCamarón de la Isla?
2 Iingcamango zeTattoo zeShrimp
2.1 i-shrimp enenyani
2.2 Umvambo wezandla zeshrimp
2.3 I-shrimp enengqiqo
2.4 Imvumi yesimbo semveli
2.5 ITattoo yeShrimp encinci
2.6 Umvambo we shrimp
3 Iifoto ze-shrimp tattoos
Yayingubani uCamarón de la Isla?
UCamarón wazalelwa eSan Fernando, eCádiz, ngo-1950, ikamva losapho lwegypsy. Emva koko igama lakhe lalinguJosé Monje Cruz, enyanisweni, igama elambonakalisayo nelathi laba sisiteketiso sakhe sobugcisa alizange lifunyanwe de kube kamva, enkosi kumalume wakhe, owayecinga ukuba le nkwenkwana yayifana kakhulu nezo zilwanyana kuba yayiluthuthu ibe mhlophe. I "de la Isla" yongezwa nasemva kwexesha ukuphawula apho ivela khona, kuba iSan Fernando ikwisiqithi saseLeón.
Njengomntwana wayenobunzima obukhulu bezoqoqosho, ngoko waqalisa ukucula ukuze afumane imali. Kancinci kancinci uye wafumana udumo ngenxa yemiboniso yakhe kwimiboniso kunye nabaculi abahamba kunye noJuanito Valderrama kwiikhenketho zabo.
Kodwa impumelelo iza kamva, emva koko ukuya eMadrid kwaye ngakumbi xa ukhulula i-albhamu intsomi yexesha, enye yeyona flamenco ibalulekileyo, apho ade agubungele imibongo kaLorca, nalapho kuvela khona izandi eziqhelekileyo ze-jazz kunye ne-rock. Udumo lwakhe lusaqhubeka lukhula, nangona kunjalo, emva kweminyaka embalwa ubulawa ngumhlaza wemiphunga obangelwa kukuba likhoboka lecuba.
Nanamhlanje uzilile kwaye khumbula njengentsomi, kwaye ine-motto yayo phakathi kwabalandeli kunye nabalandeli: "uCamarón uhlala."
Iingcamango zeTattoo zeShrimp
Ngoku siyazi ngakumbi malunga nale mvumi, Makhe sibone ukuba singayisebenzisa njani inzuzo kwi tattoo. Inyaniso yeyokuba inamathuba amaninzi ngakumbi kunokuba ibonakala xa uqala ukuyijonga:
Akuthandabuzeki Uhlobo lokuqala lwe tattoo olunokuthi lufike engqondweni emva kokucinga ngalo mculi ngomnye apho abonwa khona kubo bonke ubukhazikhazi bakhe, kwaye ngenxa yoko akukho nto efana neyokwenene.. Khangela umculi owazi ukuprinta bonke ubomi obufunekayo ezi ntlobo ze tattoos: i-shading, i-expression, i-posture ... yonke into kufuneka idlulise idrama yobomi kunye nohlobo lomculo awayeyingcali kuyo.
Umvambo wezandla zeshrimp
Enye yezinto eyayikhunjulwa kakhulu leli gcisa zizandla zakhe, kwaye kungekhona nje ngenxa yokuba wayesazi indlela yokusingatha ukuba ashiye wonke umntu engathethi ngobugcisa bakhe, kodwa nangenxa yokuba wayenomvambo omncinci weenkwenkwezi kunye nenyanga phakathi kwesithupha sakhe kunye nomphambili. Izandla ziyinxalenye ecacileyo kakhulu yomzimba, ngoko ke, xa uphefumlelwe tattoo yale ndlela, khetha isikhundla esiqhelekileyo, umzekelo, ukubetha okanye nge-cigar.
Eyona nto imnandi kwaye ithandeka kakhulu ukujija ukukhumbula igcisa lakho olithandayo amele igama lakhe lesiteketiso ngendlela yokoqobo: i-shrimp enemilenze yayo, umzimba wayo omncinci onqabileyo kunye nombala wayo obomvu othandekayo. Hamba kunye namanye amazwi, isiginci okanye isiqithi esincinci ukuze umdlalo wamagama ungalahleki kwaye u-voila, sele unayo i-Camaroncito de la Isla yakho. kumnandi kakhulu kwaye ivumela ukudlala ngakumbi ngombala.
Imvumi yesimbo semveli
Yile nto isimbo semveli esinayo: yonke into ibonakala ilungile kwaye ngaphezu kwayo yonke into ayikhe iphume kwisitayile kuba yeyona ingenaxesha. Dlala ngeenwele ezazigqitywe ngaphambili ukunika umthamo woyilo kwaye musa ukulayisha ikhathuni kakhulu ukuze ingaphelelwa ngamandla. Ukuba ukhetha ukubeka isakhelo kuyo okanye uhambe nayo nenye into, sebenzisa iimbekiselo, ezifana neentendelezo okanye irekhodi.
ITattoo yeShrimp encinci
Ngaba zikhona iitattoos zeShrimp ezincinci? Impendulo nguewe, zikho, kwaye nazo zipholile kwaye ziqala kakhulu. Unokukhetha ukwenza ngokulula iprofayili yemvumi ngomgca olula, izandla zakhe okanye isiginci. Unokude umbonise ukuba ufuna uyilo olucokisekileyo, imfihlo kukufumana uyilo olulula olunombala omncinci. Ukuba yimodeli encinci, esi siqwenga singcono kwiindawo ezifana nezandla, apho ziqulunqwe ngokwemvelo.
Umvambo we shrimp
Kwaye siphetha nge tattoo yalo mculi owaziwa kakhulu, lowo yena ngokwakhe wayephethe ngesandla, phakathi kobhontsi nomnwe, inkwenkwezi nenyanga. Kukho iingcamango ezininzi malunga nentsingiselo yayo (ukuba ikhuthaza umanyano phakathi kweMpuma neNtshona, ukuba i-Muslim-impembelelo, ukuba i-tattooist iyayithanda nje ...) kodwa akukho mntu uyazi intsingiselo yayo ngokuqinisekileyo ... ngokuqinisekileyo ilungile. indlela yokondla ilivo lakhe .
Siyathemba ukuba ulithandile eli nqaku leCamaron tattoo kwaye ufumene umbono olungileyo woyilo lwakho olulandelayo. Khawusixelele, ingaba unayo itattoo yale mvumi? Yeyiphi ingoma yakhe osincomayo? Buphawule njani ubomi bakho?
Iifoto ze-shrimp tattoos
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iimpawu zomntu » Iitattoos zeCamaron, zabalandeli bemvumi edumileyo yeflamenco
I-Mjolnir tattoos, isando esimangalisayo seThor